Liva Andriamanantena · Avrily 2018 · Global Voices teny Malagasy
Liva Andriamanantena · Avrily, 2018
Lahatsoratra farany an'i Liva Andriamanantena tamin'ny Avrily, 2018
"...tsy mahafantatra ny dikan'ny hoe feminisma ny governemanta Shinoa, tsy mahatakatra izay zavatra ataon'ny feminista, ary tsy mahafantatra ny zavatra izay tadiavin'izy ireo."
Afrika Mainty 28 Avrily 2018
Rehefa nahita i Dr. Vasudevan fa olana goavana manerana ny firenena ny fako plastika , dia namolavola fomba iray hanodinana ny fako plastika potipotika ho làlana malefaka sy maharitra izy.
"Manolotra fomba fijery vaovao ho an'ny mpamaky Global Voices momba ny fiarahamonina sy ny politika Thailandey ny The Isaan Record amin'ny alalan'ny famoahana vaovao voalanjalanja tsara , ny fomba fiasa sy ny fanadihadiana avy any amin'ny avaratra atsinanan'i Thailandy."
Sary avy any Maorisy: mariazy sambatra
(Tamin'ny 10 May 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy) Annoella sy Sebastien tamin'ny andro mariazin'izy ireo. Avy amin'i Sebastien Merion Tany Nouvelle-Calédonie i Annoella sy Sebastien no nihaona. Avy any Maorisy i Annoella ary avy any amin'ny tanàndehiben'i Frantsa i Sebastien sy nonina ary namahana bilaogy momba an'i Nouvelle-Calédonie...
Hetsika Aorian'ny Vovonana: Andeha atao malaza ny GV!
Ny atrikasa "Ndao atao malaza ny GV !" izay natao tany Colombo tamin'ny 30 Novambra, 2017, dia fivoriana fikaonandoha voalohany momba ny zavatra azontsika, mpikambana GV atao momba izany.
Lahatsary: Ny Popcorn Shinoa Mipoaka
Azia Atsinanana 23 Avrily 2018
Nivezivezy tao amin'ny aterineto ny lahatsarin'ny teknika shinoa fanamboarana popcorn. Na dia vokatry ny fipoahan'ny voa-katsaka (amin'ny feo ping sy pop) izay mandeha tsy ankijanona aza ho an'ny maro ny popcorn ; any Shina kosa, feo hafa (bang) mipoaka no hahenoana ny fikarakarana izany.